China Silicone Coasters fekitori uye vagadziri | SJJ
Nzvimbo dzakatsetseka dzematafura, bhairi yepamusoro kana tireyi inogara ichiita hupenyu hwedu hwemazuva ano uye hwakashongedzwa, machira esilicone akakwana kuchengetedza matafura ako, bhairi yepamusoro uye tireyi kubva pakupisa nehunyoro. Uye iwo masilicone coasters anobata mahwendefa, makapu, mbiya uye chekavha ine yakasimba, yakachengeteka uye isiri-inotsvedza base ...
Nzvimbo dzakatsetseka dzematafura, bhairi yepamusoro kana tireyi inogara ichiita hupenyu hwedu hwemazuva ano uye hwakashongedzwa, machira esilicone akakwana kuchengetedza matafura ako, bhairi yepamusoro uye tireyi kubva pakupisa nehunyoro. Uye iwo masilicone coasters anobata mahwendefa, makapu, ndiro nemidziyo yekucheka ine yakasimba, yakachengeteka uye isinga tsvedza base. Iwo silicone coasters anogadzirwa neakakwira mhando silicone zvinhu izvo zvine hushamwari, zvakatipoteredza uye zvisina-chepfu. Izvo zvinhu zvakapfava uye zvinogara kwenguva refu, marogo acho ane mavara uye anopenya, saka iwo macoone esilicone anogona kushandiswa chero kupi sezvipo zvekusimudzira, zvipo zvebhizinesi kana zvimwe zvinangwa. Iwo akajairwa maumbirwo akatenderera uye akaenzana, asi timu yedu yehunyanzvi inogona kuumba maumbirwo zvinoenderana neyako dhizaini, uye iwo mavara anogona kugadziridzwa futi. Iwo silicone coasters anonyatsoratidza kwazvo iwo akakosha mazano uye mazano kubva kune vagadziri, sangano kana ivo fundraisers.
Pashure: Silicone Mukombe muvharo Inovhara
Zvadaro: Silicone Kadhi Vabati